विश्वबजारमा ल्यापटपको भविष्य कमजोर आकलन गरिन्छ । तपाईहरुले यसमै भविष्य कसरी देख्नुभयो?
विश्वभर स्मार्टफोन स्मार्ट ग्याजेटहरुको बढ्दो उत्पादन र बजार विस्तार देखिन्छ । कतिपयले ल्यापटपको भविष्य छैन भनेर पनि भन्ने गरेको सुन्छौ । तर हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारलाई हेरेर मात्र हुँदैन । नेपालमा अझै पनि साक्षरता दर ६५ प्रतिशत मात्र छ । नयाँ जेनेरेसनले प्रविधिमा अभ्यस्त हुने ल्यापटपबाट नै हो । विकसित मुलुकका नागरिकले पहिले नै राम्रा ब्राण्डका ल्यापटप किनेर चलाइरहेका होलान्, उनीहरु अब किन्ने डिभाइस स्मार्टफोन हुन सक्छ । तर नेपालमा आउने जेनेरेसनले ल्यापटप नै किन्ने देखेका छौं ।
ल्यापटपमा पनि असुस नै किन किन्ने?
असुस मात्र हैन सबै ब्राण्डका ल्यापटपहरु भविष्यमा पनि नेपाली बजारमा उपभोक्तासम्म पुग्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । अन्य ब्राण्डसँग असुससले थप सुविधाहरु दिँदै आएकाले हामीले नेपालको ल्यापटप बजार दरिलो उपस्थितिका साथ हुन्छौं । विश्व बजारमा ३० वर्षदेखि र नेपालमा हामीले १३ वर्षदेखि असुसको ल्यापटप विक्री गरिरहेका छौं । तुलनात्मक रुपमा असुस नै उत्कृष्ट ब्राण्डको रुपमा उपभोक्ताले मूल्यांकन गरेको पाएका छौं । अरु ब्राण्डलाई नराम्रो र असुस मात्र राम्रो भनेका छैनौं तर हामीले दिने सुविधा थप गुणस्तरिय र सहज छ भन्ने दाबी गर्छौं । सबै मोडेलका ल्यापटपमा जेनुन विन्डोज, दुई वर्षको वारेन्टी र गुणस्तरिय एस्सेसरिजमा हामी अगाडि छौं ।
नेपालमा औषत उपभोक्ता छन् तर असुसले महँगो ब्राण्डको बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखियो ।
नेपाली बजारमा असुसका ३० हजारदेखि ४ लाखसम्मका ल्यापटप उपलब्ध छन् । हामीले नेपालमा सामान्य प्रयोगकर्तादेखि प्रोफेसनल प्रयोगकर्ताका लागि ल्यापटप बजारमा ल्याएका छौं । हालै सार्वजनिक गरिएका प्रो मोडेल भने महँगा हुन् । जेनबुक प्रो डुओ, जेनबुक डुओ, जेनबु १५ र जेनबुक १४ मोडेलहरु बजारमा उपलब्ध नयाँ ब्राण्ड हुन् । प्रो मोडेलहरु धेरै पावरफुल र बढी सुविधासम्पन्न भएकाले प्रोफेसनल प्रयोगकर्ताहरुका लागि बढी उपयोगी छन् । हामी सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि महँगो किन्नुहोस् भन्दैनौं । मूल्य र आवश्यकता अनुसारका मोडेल नेपाली बजारमा छन् ।
प्रो मोडेलका उपयोगिता र यसका लक्षित वर्ग कस्ता देख्नुहुन्छ?
नेपाल डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । डिजिटल कन्टेन्टहरु बनाउन उच्च गुणस्तरका प्रविधिहरुको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्ला चार मुख्य मोडेलहरु कन्टेन्ट डिजाइनर, ग्राफिक्समा काम गर्ने, श्रृजनात्मक माभेरिक्स, कार्टुनिष्ट, सम्पादकहरु, गेमरहरु, र मल्टिटास्किंग व्यावसायिक प्रयोगकर्ता लगाएतका उच्च प्राविधिक क्षमताको काम गर्ने प्रोफेसनलहरुका उपयोगी हुन्छ । फुल वाइड ४के यूएचडी ओएलईडी डिस्प्ले, फुल लेन्थको १९२० पिक्सेल असुस स्क्रीनप्याड प्लस समेतको उच्च गुणस्तरको सुविधाले उपभोक्तालाई आफ्नो व्यवसायीक र व्यक्तिगत दुबै काम सँगसँगै गर्न सहज हुन्छ ।
यी मोेडेल कहिलेदेखि उपभोक्ताले किन्न पाउँछन् र ल्यापटपसँग पाउने अन्य सुविधा के छन्?
चारवटै मोडेलहरु माघ २६ देखि बजारमा उपलब्ध गराइसकेका छौं । दराज डटकम, सस्तो डिल डटकम, नागमणी डटकम डट एनपी लगाएतका अनलाइन सपिङ साइटबाट पनि किन्न सकिन्छ । जेनबुक प्रो डुओका साथमा एउटा स्टायलस आउँछ भने उत्कृष्टरुपमा हेर्नको लागि ल्यापटप स्ट्याण्ड उपलब्ध हुनेछ । जेनबुक डुओमा पनि एउटा स्टायलस उपलब्ध हुनेछ भने ल्यापटप स्ट्याण्ड आउनेछ । यसका बाबजुद हामीले जेनुन विन्डोज दिएका छौं भने दुई वर्षको वल्र्डवाइड वारेन्टी दिएका छौं । यी सबैभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उपभोक्तालाई सोचेभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि असुसका प्रडक्टले दिनेछन् ।